टेक्नोलोजी Archives - Page3of 12 - Nepali Virals
२५ श्रावण २०७०, शुक्रबार ०८:५७	372
२० श्रावण २०७०, आईतवार १३:३५	410
२६ असार २०७०, बुधबार १७:१६	1,575
तपाइँ हामी सबै नेपालीलाई अंग्रेजी असजिलो नै लाग्छ। मतलब हाम्रा लागि अंग्रेजी सजिलो छैन। कम्प्युटर र इन्टरनेटको भाषा अंग्रेजी भएकाले तीनमा रहेका सामग्री प्रयोगमा हामीलाई समस्या छ। त्यसको समाधान पनि विस्तारै तयार हुँदैछन्
२२ असार २०७०, शनिबार २१:३५	738
१४ असार २०७०, शुक्रबार १२:५०	405
कार्यालयबाट निस्कन हतार भएको बेलामा कम्प्युटर बन्द गर्न बिर्सनु भयो? कम्प्युटर खुलै राखेर बाहिर निस्कनु भयो र्फकन समय लाग्ने भयो कम्प्युटर बन्द गर्नुपरयो। यस्तो अवस्थामा घर वा कार्यालय बाहिरैबाट तपाइँको कम्प्युटर बन्द गरिदिन्छ ट्वीटरले। विदेशमा हुनुहुन्छ र घरमा कम्प्युटर खुलिरहेको छ भने त्यसलाई तपाइँले सजिलै बन्द गर्न सक्नुहुन्छ।
१२ असार २०७०, बुधबार १७:५०	374
कम्प्युटर प्रयोग गर्नेहरुलाई कम्प्युटर सुस्तो खुलेर र ढिलो बन्द भएर हैरान बनाएको हुन्छ। तपाइँले दैनिक नै कम्प्युटर ढिलो बन्द भएका कारण घर वा कार्यालयबाट निस्कन ढिलाइ भोग्नुभएको होला। कम्प्युटरको अपरेटिङ सिस्टम बन्द हुनका लागि केही समय लागिहाल्छ। त्यो तपाइँ हामीलाई हतार भएको बेलामा निक्कै लामो लागिरहेको हुन्छ। यसलाई घटाएर चाहेको समयमा बन्द हुने पनि गराउन सकिन्छ।
११ असार २०७०, मंगलवार ०७:०६	422
कम्प्युटर ढिलो खुलेर हैरान हुनुभएको छ? तपाइँको कम्प्युटर खुल्न धेरै समय लगाउँछ भने तपाइँलाई कम्प्युटर चलाउन नै हैरान लाग्छ। यदी यस्तो हो भने तपाइँका लागि कम्प्युटर छिटो खुलाउने सजिलो उपाय पनि छ। ती उपाय हुन अनावश्यक सफ्टवेयरलाई लोड हुनबाट रोक्ने। जसले तपाइँको कम्प्युटरलाई छिटो खुल्ने बनाउँछ। त्यसखालको सेटिङ कम्प्युटरमा अपनाउन यसो गर्नुपर्छ....
चोरी गर्नेको गुगल चट
५ असार २०७०, बुधबार ११:५०	447
वेबसाइट, यतिखेर नेपालमा यसैको ट्रेण्ड बसेको छ। काठमाडौंका हरेक जागिर छोडेका पत्रकार वेबसाइट खोलिरहेका छन्। पत्रकारिता गर्न या आफ्नो पत्रकारिताको लतलाई कायम राख्न। विदेशीएका नेपाली उपलब्ध उच्चगतिको इन्टरनेट र खाली समयलाई कटाउन ब्लग तथा वेबसाइट नै चलाइरहेका छन्। यी दुवै प्रवृत्तिले एउटा फाइदा चाहिँ के भएको छ भने इन्टरनेटमा नेपाली भाषाको प्रयोग बढिरहेको छ।
छिटो बनाऔं कम्प्युटर
४ असार २०७०, मंगलवार ००:३६	375
कम्प्युटर, आम दैनिकीको हिस्सा बनिसकेको छ। तपाइँ हाम्रो जिवनको महत्वपूर्ण अंगमात्र बनेको छैन रोजीरोटीको सबाल पनि जोडिएको छ। इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वसँग जोडिन साथै हिसाब किताब, लेखन सबैका लागि प्रयोग हुने यो चलाउँदै जाँदा सुस्तो भएको अनुभव पनि हुन्छ। कम्प्युटर चलाउँदै जाँदा धेरैले यसखालको अनुभव गर्नुभएको होला। विभिन्न सफ्टवेयरका कारण पनि कम्प्युटर सुस्तो भइरहेको हुन्छ।
यसरी रोकौं पोर्न
३ असार २०७०, सोमबार ०७:११	437
इन्टरनेट, यो विश्वव्यापी कम्प्यूटरको सञ्जालले जिवनलाई निक्कै सहज बनाएको छ। त्यसो त इन्टरनेटमा उपलब्ध केही सामग्रीले जिवन नै भताभुंग पनि पार्न सक्छ। इन्टरनेट सस्तो, सहज र सबैका लागि उपलब्ध भएसँगै यसले पोर्नलाई पनि सहज बनाइदिएको छ। इन्टरनेटमा पोर्न सामग्री तथा वेबसाइटले तपाइँ अनि तपाइँका बालबालिकालाई बिगार्ने सम्भावनालाई पनि धेरै बढाएको छ।